Fiovàna Mpitantana ao Amin’ny Lingua Arabo! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Mey 2018 1:30 GMT
Miarahaba antsika rehetra! Tsy ela akory izay, nanapaka hevitra ny hiato tsy ho Mpitantana ny Fandikàna ho amin'ny teny Arabo intsony i Rawan Gharib. Fanirian'i Rawan ny hametraka ho laharam-pahamehany indray ny hoavy no sady mijanona hatrany ato anatin'ny vondrom-piarahamonintsika.
Roa taona lasa teo izay i Rawan no nirotsaka nanatevina laharana ny tarika Mpitantana Asa Fandikàna tato amintsika, ary tena fanampiana goavana tokoa ho an'ny Lingua Arabo! Fisaorana mitafotafo ho anao ry Rawan! Manomboka izao dia eo ambany fitantanan'i Ali Khalil ny Lingua Arabo !